Ndị na-eweta ngwaahịa na-ehicha China & onye nrụpụta - Skylark Chemical
Szechuan Skylark Chemical Co., Ltd etinyela aka na ụlọ ọrụ kemịkalụ dị mma kwa ụbọchị kemgbe afọ 21.Dị ka nkeji mbụ nke 2021, ya na ndị ọrụ 100+ erutela ọnụ ahịa ahịa kwa afọ nke 11.13 US dollar, ma soro ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ 14 na China rụkọọ ọrụ.Ike zuru oke aghọwo ụlọ ọrụ na-eduga na ụlọ ọrụ na Southwest nke China.
Ka ọ dị ugbu a, anyị ejikọtala ụdọ ọkọnọ kemgbe 2016, wee bịanye aka na mmekorita nke akụrụngwa na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ dị ka Sinopec na Sinochem iji hụ na mgbanwe ọnụahịa akụrụngwa agaghị emetụta atụmatụ azụmaahịa nke ndị mmekọ anyị.Na mgbakwunye, anyị wuru nnukwu ụlọ ọrụ na-efe efe PET & PE iji hụ na njikọta zuru oke nke agbụ ọkọnọ wee meju asọmpi zuru ụwa ọnụ.
Ọkachamara dị elu Chlorine Bleaching...
Akwa akwa-arụmọrụ nke ọma na-eji Ex...
Degreaser kichin dị elu nke ọma nwere ọmarịcha ...
Ọkachamara Bio-enzyme Deodorizer fesa Maka Pe ...
Ọkachamara Pet De-Greaser nwere ọmarịcha Perf…
Enyemaka rinses dị elu nke ọma Maka igwe efere na E...
Ọkachamara Pet Coat Color Care Shampoo na E...
Nweta ihe nlele efu
Obi dị m ụtọ ịme oge ọhụhụOge ihusite na WhatsApp.
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọnụahịa, biko hapụ email gị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 12.
Ụlọ ọrụ ahụ na-ewebata ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ, ahịa, talent, ma na-ahụ maka ndị ahịa.
Usoro R & D na-agbanwe agbanwe nwere ike imeju ihe kachasị elu na ihe ndị ahịa chọrọ.
Teknụzụ kachasị emelitere na nkà ihe ọmụma nke enyi na gburugburu ebe obibi.
Nkà ihe ọmụma anyị nke ngwaahịa Cleaning & Care Pet
N'ajụjụ ọnụ a, onye njikwa ahịa Skylark Chemical kwuru, "Malite na Septemba 2020....
Ọnọdụ na ntụzịaka mmepe nke ụlọ ọrụ ngwaahịa kemịkalụ kwa ụbọchị
N'ịtụle site n'ọnọdụ dị ugbu a, obere carbon ga-abụ naanị ụzọ maka ụlọ ọrụ nchacha iji nweta mmepe na-adịgide adịgide, na mgbanwe mgbanwe nke akụ na ụba carbon dị ala aghọwo isi ihe na-emekarị na mmepe nke akụ na ụba ụwa.Na mba ụwa, na mmalite 1980 ...
Ngwa sara mbara nke nkwadebe enzyme na ngwaahịa Skylark Chemical
N'ihi mmụba na-abawanye nke nchekwa gburugburu ebe obibi site na ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa, nkwadebe enzyme, nke bụ ihe na-eme ka gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee njirimara nke arụmọrụ dị elu, iji nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi, ...